Ratsimbazafy Jean Paul Manjavozavo ny hoavin�ny fikambanana AV 7
Tafaresaka fohy tamin�ny mpanao gazety teto Antananarivo omaly ny filoha lefitry AV 7 na ny � Association des victimes du 7 f�vrier 2009 �, Jean-Paul Ratsimbazafy na Tsimirehadava.
Nambarany fa manjavozavo tanteraka ankehitriny ny fampiharana an’ilay didim-panjakana navoakan’ny filohan’ny Repoblika Malagasy, Hery Rajaonarimampianina, ny hampiditra ho mpiasam-panjakana an’ireo niharam-boina tamin’ny raharaha 7 feborary 2009. Nambarany fa misy ampahana rafi-panjakana vitsivitsy izay tsy manaiky ny hampiasa ireo mpikambana AV 7 halefa any amin’izy ireo. Mba hialana amin’izay mety ho vesatry ny kitapombolam-panjakana amin’ny fanoloram-potsiny fanampiana ho azy ireo sy mba ho fiarovana azy ireo dia rariny raha mba miasa ho an’ny firenena izy ireo. Mila hovana koa, hoy ity filoha lefitry ny AV 7 ity, ny fepetra navoaka miaraka amin’io didy navoakan’ny filoham-pirenena io izay milaza fa isaky ny 5 taona ihany fa azo havaozina ny fifanarahana tokony hataon’ireo mpikambana AV 7 horaisina ho mpiasam-panjakana. Manoloana ny zava-misy dia manainga ireo namana mpitolona AV 7 fototry ny fananganana izao Repobika faha-4 izao, ity filoha lefiny ity, mba hiray hina ka hanambatra ny herin’izy ireo mba hampanjary an’i Madagasikara ho firenena matanjaka sy mahaleotena tanteraka.